Saddex waxyaalood oo aadan ka warqabin Maalinta Jacaylkaada, maalinta jacaylka | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 14, 2020 00: 00 No Comments
1- Asal ahaan = shimbiraha
Khuraafaad fara badan ayaa wareegan asalka maalinta Jacaylka. Laakiin xafladda ayaa ku dhalatay XIV qarnigii, gudaha Ingiriiska. Febraayo 14 waxaa loo dabaaldegay sidii iiddii kuwii caashaqi jiray, maxaa yeelay waxaa loo maleynayay in shimbiraha ay doorteen maanta inay guursadaan. Dabaaldega ayaa markaa ku faafay qaaradda oo dhan.
Waxaan ka helnaa isla ansaxintan la midka ah ee Maalinta Jacaylka iyada oo la jecel yahay gabayada badan ee qarniyadii dhexe. Au XV th qarnigii, Charles of Orleans, oo maxbuus kujiro Ingriiska, wuxuu badanaa sheegaa Maalinta Jacaylka, waana maalinta ay caashaqu doortaan lamaanahooda ama ay cusbooneysiiyaan dhaarta.
2- Saddex Valentin, Saddex Quduus
Maalinta Jacaylka, oo loo dabaaldegay 14-kii Febraayo, ayaa Kaniisadda Katooliga ay u aqoonsatay inay tahay ilaaliyeyaal caashaq. Ugu yaraan sedex qoduus oo kaladuwan ayaa lagu magacaabaa Valentine. Iiddooda waxaa lagu go’aamiyey Febraayo 14 amar uu soo saaray baadari-yahanka sanadka 495. Maalinta Jacaylka ee Rome, oo ahaa wadaad shahiidnimo kaga dhacday Rome qeybtii labaad ee saddexaad qarnigii.
Valentin de Terni, oo ah hoggaamiyaha kiniisadduInteramma (Terni casri ah, oo ku taal Talyaaniga), ), oo sidoo kale ku xanuunsaday shahiid isku waqti. Jacaylka saddexaad wuxuu ku noolaa Afrika asxaab kale. Laakiin labada Valentines ee ugu horreeya waxay noqon karaan isku qof, oo lagu soo bandhigay howlaheedii isdaba joogga ahaa.
3- The jacayl, ama xorriyadda loo ogol yahay dumarka
Ilaa dhamaadka siddeed iyo tobnaad qarnigii, iyo sida caadada u ahayd waqooyiga Faransiiska, munaasabadda Maalinta Jacaylka, haweenku waxay yeelan karaan xiriir ay la yeeshaan nin aan ahayn ninkooda.
Xaasasku waxay xiriir la leeyihiin a "Jacayl Ama "galantin", mid ay iyagu doorteen. Haweeney ayaa ku tiri heesta waqtiga ayaa tiri:
Aug11 05: 49